Shirkii Guurtida Sare Iyo Xukuumada Oo Galabta Kafurmay Madasha Shirarka Ee Qaryaan Dhoodaan - Cakaara News
Shirkii Guurtida Sare Iyo Xukuumada Oo Galabta Kafurmay Madasha Shirarka Ee Qaryaan Dhoodaan
Jigjiga(CN) Arbaco.Jan.21.2015, Waxaa maanta galinkii danbe si toos ah uga bilaabmay shirkii guurtida sare ee deegaanka iyo xukuumada oo ka furmay hoolka shirarka ee Qaryaan Dhoodaan. Shirkan oo looga arinsanayo arimo dhowr ah ayaa waxaa kasoo qaygalay madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar, madaxwayne kuxigeenka DDSI mudane Mowliid Haayir ahna wasiirka waxbarashada DDSI, hogaamiye dhaqameedka odoyaasha iyo wax-garadka oo ka kala yimid dhamaan degmooyinka deegaanka iyo gobolada, masuuliyiin kale iyo qaar kamida madaxdii hore ee deegaanka.
Sida aad wararkanagii hore kala socteen shirkan ayay ujeedadiisu tahay wadatashiga guurtida iyo xukuumada oo looga arinsanayo arimo ay kamid yihiin nabadgalyada iyo ladagaalanka argagixisa, kawada hadalka arimaha doorashooyinka XDSHSI iyo go'aanka dumarka, wax-qabadka iyo caqabadaha dhanka horumarka ee sanadadii ugu danbaysay, iyo sidii looga tashan lahaa qorshaha shanta sano ee markii labaad bilaabanaya (GTP-2).
Hadaba shirka ayaa waxaa ugu horayntii kahadlay Madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar oo soo bandhigay ka xukuumad ahaan qodobadii yaalay ee ay guurtida iyo xukuumadu ka arinsanayeen. Madaxwaynaha ayaa ugu horayntii uga mahad celiyay odoyaasha iyo wax-garadkii ka kala yimid qaybaha kala duwan ee deegaanka isagoo soo bandhigay qorshayaasha xukuumada iyo sida ay lagama maar maan u tahay in markasta odoyaasha iyo wax garadka ay xukuumadu kala tashato qorshayaasha iyo guud ahaanba xaalada deegaanka sidii caadada u ahayd awalba xukuumadan uu hogaaminayo XDSHSI.
Hogaamiyo dhaqmeedkii iyo wax- garadka oo iyaguna aad usoo dhaweeyay sida ay xukuumadu markasta ahmiyada koobaad ee qorshaha iyo go'aamada u siinayso waxgaradka iyo odoyaasha deegaanka maadaama ay yihiin hogaamintii dhaqanka iyo arimaha guud ee dalka iyo deegaanka.
Hadaba iyadoo uu shirkani sii soconayo ilaa labo maalmood ayaa qodobada shirkan galabta uu gurigu aad u lafa guray waxaa kamid ahaa qorshaha XDSHSI ee ku aadan ka qayb galinta dumarka doorasha 5aad ee sanadkan 2007-da. Sidoo kale waxaa fahan guud laga sii qaatay qodobka ladagaalanka argagixisada iyo xag-jirka oo lafilayo inuu yahay arinka ugu horeeya barito gurigu aad uga hadli doono.
Hogaamin dhaqameedkii, wax-garadki, salaadiintiii iyo qaar kamida madaxdii xukuumadihii hore ee deegaanka soo maray oo uu kamid ahaa mudane Khadar Macalin ayaa ka hadlay go'aanka dumarka ee doorashada, halkaas oo aad loo soo bandhigay caqabadihii jiray hada kahor iyo fahanka ku aadan in dumarka laga qayb galiyo doorashada.
Waxaana ugu horayntii kahadlay Garaad Kulmiye Garaad Maxamed Garaad Dool oo aad usoo dhaweeyay qorshaha xisbiga ee dumarka isagoo sheegay in dmarku ay yihiin kuwa codka ugu badan leh isla markaana kaarasha cod bixinta ugu badan. Garaadka oo kahadlay ahmiyada dumarka ee dhanka horumarka iyo guulaha laga arkay ayaa sheegay in hadii shantan sano gabdhaha lagu daro ay kaalin hormuud ka qaadan doonaan horumarka.
Ugaasyadii, Suldaamadii iyo hogaamin dhaqameedkii ayaa aad u soo dhaweeyay in gabdhaha laga qayb galiyo doorashada iyagoo aad ugu amaanay XDSHSI in uu soo hoyiyay guul iyo xaq maqnaa oo dumarka kujirtay taasoo aan hirgalin hada kahor. Sida ay soo dhigayeen wax-garadka iyo qaar kamida madaxdii hore waxaa lasoo bandhigay caqabadihii hore ee laxidhiidhay in dumarka shaqooyinka muhiimka ah lagusoo daro. Sidoo kale waxaa laga hadlay caqabadaha iyo fahan darada ka iman karta hadii dumarka laga qayb galiyo taasoo ay kamid ahayd dhaqan ahaan iyo fahan darada ka dhanka ah dumarka.
Sidoo kale waxaa ay salaadinta iyo culimada arimaha diintu soo bandhigeen waxa ay diintu ka qabto iyo dhaqan ahaan iyagoo soo daliishanayay aayadaha Quraanka kariimka ah iyo axaadiista. Waxayna culumadii kahadashay sheegeen in dumarka taariikh ahaan lasoo xaqirijiray balse ay diinta Islaamku kor u qaaday xuquuqdii dumarka ee horay u aasnaan jirtay.
Guriga ayaa si cilmiyaysan u soo dhigay ugana dooday arimaha dumarka ee laxidhiidha ka qaybgalinta shaqooyinka ama doorashan. Waxaana kamid ahaa qiimaha iyo ahmiyada dumarka ee uu gurigu ku taageerayay go'aankan aaminaada, musuq-yarida, rabsho-yaraanta, iyo kartiyo badan oo u khaas ah iyadoo ay dhaqan ahaan gurigu soo xiganayay Dhulka Hooyo, Afka Hooyo, iyo erayo badan oo tilamaamaya mudnaanta gabdhaha.
Caqabadihii hore ee ay soo dhigayeen madaxdii hore ayaa waxaa kamid ahaa in ay reerka ay gabadhu kasoo jeedo ay yidhaahdaan waa bahdil iyo sidee ayay noo matali gabadh reer kale ay qabaan IWM. Walow ay wakhtigan gabdhaha deegaanku ay aad wax u barteen hadana waxaa jirtay in ay kuyaraadaan baarlamanka iyo shaqooyinka sare balse XDSHSI ayaa haatan go'aan saday ka qayb galinta dumarka doorashada iyo kuraasta baarlamanka oo ay hada kahor 3 iyo wax kayar ku ahaayeen halka uu xisbigu hada kudoodayo 35 ilaa wax kasareeya.
Guurtida wax-garadka iyo hogaamin dhaqameedka deegaanka ayaa hadaba cod buuxa kusoo dhaweeeyay qorshahan XDSHSI ee ku aaadan kaqayb galinta dumarka doorashadan 5aad oo uu xisbigu qorshaystay in uu soo sharaxdo boqolkiiba 35 iyo wixii kasareeya, taasoo ay hada kahorna uu ururka EPRDF ku amaanay xisbiga.
Kala soco CakaaraNews fafaahinta iyo go'aamada kasoo baxaya shirkan guurtida iyo waxgaradka ee ay xukuumada katashanayaan qodobada muhiimka ah ee aan kor kusoo sheegnay.